Pep Guardiola oo Sheegay inuu Dareemayo Dambi Madama uusan Guul siinin Taageerayaasha kadib Dagaalkooda Afka | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Pep Guardiola oo Sheegay inuu Dareemayo Dambi Madama uusan Guul siinin Taageerayaasha...
Pep Guardiola oo Sheegay inuu Dareemayo Dambi Madama uusan Guul siinin Taageerayaasha kadib Dagaalkooda Afka
Pep Guardiola ayaa qirtay inuu dareemay dambi markii uu guul u keeni waayay taageerayaasha Manchester City dhamaadkii isbuuca oo uu dagaal afka ah la galay qaybo ka mid ah taageerayaashiisa.
Tababaraha City ayaa ku adkeystay Sabtidii in ereyadiisii ​​si khaldan loo fahmay, ka dib guushii Champions League ee bartamihii Isbuuca ay ka gaareen Leipzig oo la rumeysan yahay inuu ka cawday taageerayaasha oo aad u yaraa.
Guardiola ayaa difaacay erayadiisa ka hor inta aysan barbaro goolal la’aan ah kala kulmin Southampton wuxuuna ku andacooday inuu weli ku qaldamay falcelintii ka timid khilaafka wakiilka taageerayaasha Kevin Parker.
“Wax khalad ah ma dhihin Leipzig kadib,” ayuu ku adkeystay Guardiola. “Waxaan idhi waxaan ciyaarnay ciyaar aad u adag, waxayna noqon doontaa ciyaar aad u adag oo aan la yeelan doono Southampton, waxaanan u baahanahay taageerada iyo taageerayaasheena.
‘Kama caban inta imatay ama aan imaan, weligay tan maan samayn noloshayda. Dabcan waan ka mahadcelinayaa, xitaa haddii 100 qof, 85 qof yimaadaan. Aad ayaan u faraxsanahay.
Previous articleTallaabada beesha caalamka ay qaadeyso ee la xiriirrta loolanka Farmaajo iyo Rooble
Next articleSawirro: Maxay ka wada-hadleen Lafta Gareen iyo safiirka Itoobiya?